Falanqeynta Barcelona vs Juventus Xaqiiqooyin dhowr ah Oo laga Qoray Kulankaan
Friday, June 22nd, 2018 - 15:53:52
Tuesday September 12, 2017 - 10:38:02 in Wararka by Abdirahman Abduqadir Maankiz
Gegida: Camp Nou
Saacadda Geeska Africa: 9:45 Habeenimo.
Dhex dhexaadiyaha: : Damir Skomina.
Labadii kooxood ee ku kulmay finalka Champions League ee Barcelona iyo Juventus ayaa caawa mar kale isku arki doona garoonka Camp Nou iyadoo finalkaas ay 3-1 ku badisay kooxda caawa martida loo yahay ee Blaugrana.
Kooxda Barcelona ayaan looga badinin gurigooda 21 kulan oo ay tartamada Yurub ah oo ay ku ciyaareen, halka Messi uu seddex gool u jiro goolashiisii 100aad ee tartamada UEFA.
Kooxda Barcelona wax dhaawacyo cusub ah ma jiraan ka hor kulanka caawa laakiin waxaa liiska ciyaartoydooda ka maqan Arda Turan oo dhaawac muruqa ah qaba iyo Paco Alcacer oo xumad darteed ku seegaya kulanka caawa ee Camp Nou.
Waxaa la filayaa in Ousmane Dembélé uu kulankiisii ugu horreeyey ee buuxa uu safto talaadada
Is bedel badan laga fili maayo safka Ernesto Valverde laakiin, waxaa dib safka ugu soo laaban kara Sergi Roberto oo booska ka badali kara Nelson Semedo.
Laakiin kooxda Bianconeri xiddigaha Chiellini, Mandzuki ayaa ku biiray liiska ciyaartoyda dhaawaca ku maqan ee Marchisio iyo Sami Khedira. Halka Cuadrado uu ganaax ku seegayo kulanka caawa iyadoo Alex Sandro uu shaki ku jiro inuu ciyaari karo madaama ay xumad heysay.
Barcelona ayaa kaliya badisay mid ka mid ah lixdii kulan ee ugu danbeysay ee tartan rasmi ah ee ay ka horyimaadeen Juventus, waana kulankii finalka Champions League ee 2015 ee ay ku badiyeen 3-1.
Barcelona ayaa sidoo kale hal kulan shabaqa ilaashatay sideedii kulan ee ugu danbeysay ee tartan rasmi ah ee ay ka horyimaadeen kooxda Talyaaniga.
Juventus ayaa kaliya laga badiyay hal kulan oo ka mid ah 15kii kulan ee ugu danbeysay ee wareega group-yada Champions League.